तामाको भाँडोमा राखेको पानी पिउनाका यस्ता छन् फाइदा ! - VOICE OF NEPAL
तामाको भाँडोमा राखेको पानी पिउनाका यस्ता छन् फाइदा !
६ मंसिर २०७७, शनिबार १५:४५
आजकल तामाको भाँडोको प्रयोग कम हुन थालेको छ । वृद्धहरूले तामाको भाँडोमा हालेर पानी पिएको देख्नुभएको होला । तामाको भाँडामा पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । यसका फाइदा यस्ता छन् :
तौल घटाउनका लागि फल र सागपातलाई आहारमा समावेश गरेर तपाईं थाकिसक्नुभएको छ भने तामाको भाँडोमा राखिएको पानी दिनदिनै पिउने गर्नुस् । तामामा पाचनतन्त्रलाई आकारमा ल्याउने क्षमता हुन्छ । यसले शरीरमा छिट्टो र प्रभावकारी तरिकाले बोसो घटाउन मद्दत गर्छ ।
बुढ्यौलीको लक्षण रोक्न
तामामा एन्टीअक्सिडेन्ट हुन्छ जसले कोषिकाको झिल्लीलाई सुरक्षित राख्छ । यसले उमेर बढ्ने गतिलाई ढिलो बनाउँछ । तामाको भाँडोमा पानी पिउँदा अनुहारमा मुजा पर्ने समस्या आउँदैन । अनि अनुहारमा भएका मृत छाला पनि भाग्छन् ।
तामामा एन्टीब्याक्टेरियल र एन्टीभाइरल गुण भरपूर हुन्छ । यसले घाउ छिट्टो भरिन्छ । तामाले शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ अनि पेटमा हुने अनेकौं आन्तरिक संक्रमणको उपचार गर्छ ।
शरीरमा भएका कणले क्यान्सर कोशिकालाई विकसित गर्छन् । तामामा भएको शक्तिशाली एन्टीअक्सिडेन्ट गुणले यी कणहरूलाई समाप्त पारिदिन्छन् र शरीरमा तिनको नकारात्मक प्रभावलाई कम गरिदिन्छन् । दिनदिनै तामाको भाँडोमा पानी पिउनुस् ।
तामाले मेलेनिनको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । मेलेनिनले नै आँखा, छाला र कपालको रंग दिने हो । शरीरलाई सूर्यको कडा किरणबाट बचाउन र घाउ निको पार्न मेलेनिन आवश्यक हुन्छ ।
शरीरमा रगतको कमी हुँदा थकान, मांसपेशीमा पीडा, कमजोरी र पाचन समस्या जस्ता लक्षण देखापर्छन् । तामाको भाँडोमा पानी पिउँदा फाइदा हुन्छ । तामाले शरीरमा कोषिका निर्माण गर्छ र रगतको कमी पूरा गर्छ ।
मिर्गौला र कलेजो
शरीरको आन्तरिक सफाइका लागि तामाको पानीले सहायता गर्छ । यसले मिर्गौला र कलेजोलाई स्वस्थ राख्छ । तिनीहरूलाई संक्रमणबाट बचाउनका लागि तामाको पानी लाभदायक हुन्छ ।
तामामा खनिज पदार्थ भरपूर हुन्छ । यसले थाइरोइड भगाउँछ । थाइरोइड ग्रन्थिलाई सही कार्यान्वयन गराउन तामाले मद्दत गर्छ ।
तामाले दिमागलाई उत्तेजित गरेर त्यसलाई सक्रिय बनाउन मद्दत गर्छ । दिनदिनै तामाको भाँडोमा पानी राखेर पिउँदा स्मरणशक्ति बलियो हुन्छ र दिमाग स्वस्थ रहन्छ ।
मौसमी खोकीमा सचेत रहन चिकित्सकहरुको आग्रह
ट्वाइलेटमा फोन चलाउनेलाई यस्ता हुन्छन् खतरा
ग्यास्ट्रिक हुनुका प्रमुख कारणहरु यस्ता छन् !
हड्डी मजबुत बनाउन के खाने ?
कुन ब्लड ग्रुपका व्यक्तिलाई कोभिड संक्रमणको बढी जोखिम ?
चुरोटको लत छ ? सजिलै छाड्न यी उपाय अपनाउनुस् !
अदुवा चियाका छन् यस्ता ७ फाइदा !
सिँढी चढ्दा हुन्छन् यस्ता फाइदा !
मौसम परिवर्तनसंगै खोकी लागेको र छातीमा कफ जमेको छ ?यसरी घरमै उपचार गर्नुहोस् !
ट्रम्पले गरे सन् २०२४ मा पुनः निर्वाचन लड्ने
बेलायती विश्वविद्यालयमा सय वर्षदेखि हुंदै आएको नेपाली पढाइ बन्द
राहदानी बनाइदिन लिएको रकम पनि हिनामिना गर्ने एनआरएनए पोर्तुगल र रेमिट्यान्समा ठगी गर्ने कोषाध्यक्ष कुँवरलाई नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा पोर्तुगलको चेतावनी !
पोर्चुगललाई युरोपियन युनियनबाट ३ बिलियन युरो ऋण प्राप्त
लकडाउनको बिरोधमा पोर्तुगाली रेस्टुरेन्ट मालिकहरूहरु ६ दिनदेखि संसदभवन आगाडी आमरण अनशनमा !
Web Summit will beastarting point for post-Pandemic world : Portuguese PM Antonio Costa
पोर्चुगलकी स्वास्थ्य महानिर्देशक ग्रसा फ़्रेइतसलाई कोरोना संक्रमण !
मंसिर २२ मा लगनगाँठो कस्दै श्वेता खड्का
रारामा आउन थाले विदेशी पाहुना चरा